Soomaaligii ugu horeeyay ee dalka Kenya ka noqda Wasiirka Gaashaandhigga oo Geeriyooday | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Soomaaligii ugu horeeyay ee dalka Kenya ka noqda Wasiirka Gaashaandhigga oo Geeriyooday
Mid ka mida siyaasiyiintii ugu waaweynaa ee Soomaalida Kenya ayaa ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Allaha u naxaiistee wasiirkii hore ee difaaca Kenya Maxamed Yuusuf Xaaji ahaa Soomaaligii ugu horeeyay ee xilkaasi ka qabta dalka Kenya, isla markaana muddo dheer ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomalida ee dalka Kenya ayaa ku xanuunsanaa Nairobi oo uu ku geeriyooday, isagoo 80 sano jir ah.
Wuxuu ahaa senetorka laga soo doorto is-maamulka Gaarisa, isagoo ka tirsanaa Aqalka Sare ee dalka Kenya, iyadoo geeridiisa ay shaaciyeen madaxda Soomaalida Kenya iyo Qoyska marxuumka.
Wuxuu sanadkii 1940-kii ku dhashay gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida Kenya, gaar ahaan Garissa. Wuxuuna dhalay illaa 9 carruur ah. Wiilka uu dhalay ee Nuuradiin Yusuf Xaaji waa Dacwad oogaha guud ee Kenya oo caan ka ah dalkaasi isagoo hoggaamiya dagaalka lagula kiro Musuqa Kenya.
Marxuum Maxamed Yuusf Xaaji ayaa xilliyadii ugu danbeeyay hogaaminayay Guddi loo xil saaray Wax-ka-bedelka Dastuurka dalka Kenya. Waxaa lagu wadaa in Galabta lagu aaso Qabuuraha Musliminta ee Langata, Nairobi.
Previous articleHalkee ku danbeeyay Shirkii Garowe ee Farmaajo ku baaqay..? (Kulanka Baydhaba & Beesha Caalamka)
Next articleGuddoomiye ku xigeenka Aqalka Sare: “Farmaajo wuxuu mar kale ku tuntay Dastuurkii dalka, isagoo og…”